3D Kudhinda Service / Pakarepo 3D Kudhinda Quote / Order 3D Prints - Createproto Tech Co, Ltd.
SERVICE / 3D Kudhinda
Unyanzvi hwekukurumidza prototyping 3D yekudhinda sevhisi, kunyangwe iri chokwadi SLA 3D kudhinda kana yakasimba SLS 3D kudhinda, iwe unogona kunyatsoona dhizaini yako pasina chero kurambidzwa.
Bhenefiti Ye 3D Kudhinda
Pfupisa Dhirivhari Nguva - Zvikamu zvinowanzo kutumirwa mukati memazuva mashoma, zvichikurumidzisa dhizaini dhizaini uye nguva yekutengesa.
Vaka Complex Geometry - Inobvumidza kugadzirwa kwezvakasiyana zvikamu zvine mamwe akaomarara mageometri uye chaiwo chaiwo pasina kuwedzera mari.
Deredza Kudhura Kwekugadzira - Dhiraivha kudzikisa mutengo wekugadzira nekubvisa kudiwa kwematurusi uye kudzikisa basa.
Chii chinonzi 3D Printing Prototype?
3D Kudhinda izita rakapamhamha rinoshandiswa kutsanangura yekuwedzera yekugadzira, iyo inosanganisira akateedzana ekukurumidza prototyping matekinoroji ayo anosanganisa akawanda matete ezvinhu zvekugadzira zvikamu.
Rapid prototyping 3D kudhinda ndiyo inokurumidza, yakapusa uye isingadhuri nzira yekushandura mazano makuru kuita zvigadzirwa zvinobudirira. Idzi michina yekudhinda ye3D haingobatsire chete kuona dhizaini asi zvakare inowana nyaya pakutanga kwekuvandudza maitiro uye mhinduro yakanangana nekugadziriswa dhizaini, ichidzivirira shanduko dzinodhura kana chigadzirwa chave kuzere kugadzirwa.
Nei Uchisarudza Createproto Ye 3D Printing Service?
Createproto inyanzvi mumunda wekukurumidza prototyping kugadzira muChina, ichipa akasiyana siyana e3D kudhinda masevhisi, kusanganisira SLA 3D kudhinda (Stereolithography), SLS 3D kudhinda (Selective Laser Sintering).
Ku Createproto Tine timu izere yevakazvipira mainjiniya uye mamaneja eprojekti ayo achashanda newe kuongorora ako maCAD dhizaini, zvigadzirwa zvechigadzirwa, zvakaenzana kushivirira, nezvimwe. Seye nyanzvi yekugadzira prototype, tinonyatsonzwisisa prototype uye zvigadzirwa zvekugadzira chero bhizinesi. Isu tinoedza kusangana nenguva dzese dzakatarwa kuti tinunure zvigadzirwa zvine vimbiso yemhando yepamusoro kune vatengi vedu pasirese nemitengo inodhura.
Chii chinonzi SLA 3D Kudhinda?
SLA 3D Kudhinda (Stereolithography) inoshandisa iyo ultraviolet laser iyo inokwevera pamusoro pemvura yemvura thermoset resin kugadzira zviuru zvematanho matete kusvikira zvikamu zvekupedzisira zvaumbwa. Yakasarudzika sarudzo yezvinhu, zvakanyanyisa kukwirira maficha resolution, uye yemhando yepamusoro ekupedzisa zvinogoneka neSLA 3D Kudhinda.
SLA 3D Kudhinda Kunoshanda Sei?
Kugadziriswa kwedata, iyo 3D Model inopinzwa muchirongwa chekucheka chepropetiary software, ine zvivakwa zvekutsigira zvakawedzerwa pazvinenge zvichidikanwa.
Iyo STL faira inozotumirwa kunodhinda pane iyo SLA muchina, iine tangi izere nemvura yemvura photosensitive resin.
Chikuva chikuva chinodzikiswa mutangi. Iyo UV laser danda rinotarisana kuburikidza neiyo lens scans contour yemuchinjikwa-chikamu padivi pemvura pamusoro.
Iyo resin iri munzvimbo yekutarisa inosimbisa nekukurumidza kuti iite imwechete nhete yezvinhu. Kana rukanda rwekutanga rwapedziswa chikuva chinodzikiswa ne0.05-0.15mm nerafa nyowani resin rinofukidza nzvimbo yekuvaka.
Iyo inotevera dura inoteedzerwa kunze, ichirapa uye kubatanidza resini kune iyo pazasi pazasi. Wobva wadzokorora maitiro aya kusvikira chikamu chavakwa.
Chii chinonzi SLS 3D Kudhinda?
SLS 3D Kudhinda (Stereo Laser Sintering) inoshandisa yakakwira simba optic laser iyo fuses diki yeupfu inoramba yakaturikidzana neyakagadzika kuburitsa dzakaomarara uye dzakasimba zvikamu zvejometri zvikamu. SLS 3D Kudhinda inovaka yakasimba zvikamu nezvizere zvinhu zveNylon, inokodzera kune anoshanda prototypes uye magumo-ekushandisa zvikamu.
SLS 3D Kudhinda Kunoshanda Sei?
Iyo poda inopararira mune yakatetepa nhete pamusoro pechikuva mukati mekamuri rakaumbwa.
Kana yatsvairwa pazasi peiyo tembiricha inonyunguduka yepolymer, laser beam inoongorora iyo poda zvichienderana nechikamu chemuchinjikwa-chikamu cheiyo dhesiki uye inotsvaira simba. Iyo unsintered upfu inotsigira mhango uye cantilever yemuenzaniso.
Kana kugadziriswa kwechikamu chemuchinjikwa chapera, hukobvu hwepuratifomu hunoderera nechetatu, uye iyo yekuisa roller inoparadzira nhokwe yeupfu hwakaenzana pairi kuti ive sintering yechikamu chitsva chemuchinjikwa.
Maitiro acho anodzokororwa kudzamara zvidimbu zvese zvatsindirwa kuti uwane modhi yakasimba.
Zvakanakira SLA 3D Kudhinda
Yakaderera dura ukobvu uye yepamusoro kurongeka.
Maumbirwo akaomarara uye ruzivo rwechokwadi.
Smooth huso uye post-kugadzirisa sarudzo.
Yakasiyana-siyana zvinhu zvemidziyo sarudzo.
Zvikumbiro zveSLA 3D Kudhinda
Prototyping Yakajeka Zvikamu.
Master Mapatani eSilicone Kuumbwa.
Zvakanakira SLS 3D Kudhinda
Injiniya-giredhi thermoplastics (Nylon, GF Nylon).
Yakanaka michina zvivakwa uye dura rekubatanidza.
Hapana zvivakwa zvekutsigira, zvichigonesa yakaoma geometri.
Tembiricha kuramba, kemikari kuramba, abrasion kuramba.
Kunyorera kweSLS 3D Kudhinda
Injiniya Bvunzo Zvikamu.
Kuguma-shandisa Kugadzira Zvikamu.
Akaomeswa maDhivha, Anokodzera Kukwana, Kurarama Hinji.
Enzanisa Iwo Anotevera Unyanzvi hweSLA Uye SLS Kuti Usarudze Iyo Yakakodzera 3D Kudhinda Service
SLS 3D kudhinda yakafuma muzvinhu uye inogona kugadzirwa epurasitiki, simbi, zvedongo, kana girazi mapoda ane kuita kwakanaka. Gadziraproto michina inogona kuburitsa zvikamu chena Nylon-12 PA650, PA 625-MF (Mineral Yakazadzwa) kana PA615-GF (Girazi Rakazadzwa). Nekudaro, iyo SLA 3D kudhinda inogona kungova yemvura photosensitive polymer, uye mashandiro ayo haana kunaka senge thermoplastic plastiki.
Iko pamusoro peiyo prototype neSLS 3D kudhinda kwakasununguka uye kwakaomarara, nepo SLA 3D kudhinda ichipa yakakwira-tsananguro yekuita kuti pamusoro pezvikamu zvive zvakatsetseka uye ruzivo rwacho runyatsojeka.
Ndeiya yakaita Kururama
Ye SLA 3D kudhinda, Minimum Wall Ukobvu = 0.02 ”(0.5mm); Kushivirira = ± 0.006 ”(0.15mm) kusvika ± 0.002” (0.05mm).
Ye SLS 3D kudhinda, Minimum Wall Ukobvu = 0.04 ”(1.0mm); Kushivirira = ± 0.008 ”(0.20mm) kusvika ± 0.004” (0.10mm).
SLA 3D kudhinda kunogona kuvaka mukumusoro resolution ine yakanakisa laser danda dhayamita uye yakanyorova masara masenduru ekuvandudza ruzivo uye kurongeka.
Mechanical Kugadziriswa Kwekuita
SLS 3D kudhinda inoshandisa chaiyo thermoplastic zvinhu kugadzira zvikamu zvine yakanaka michina zvivakwa. SLS inogadziriswa zviri nyore, uye inogona kuve nyore kugaya, uye kuchera uchichenesa SLA 3D kudhinda kunofanira kuitiswa nehanya kuitira kuti chikamu chikatsemuka.
Kuramba kune Zvakatipoteredza
Kuramba kweSLS 3d kudhinda prototypes kune zvakatipoteredza (tembiricha, hunyoro, uye chemakemikari ngura) yakafanana neiyo yezvinhu zvine thermoplastic zvinhu; SLA 3d yekudhinda prototypes inokanganisa hunyoro uye kukora kwemakemikari, uye munzvimbo dzinopfuura makumi matatu neshanu ivo vanozove nyoro uye deform.
Glue Kubatanidza Simba
Iyo SLS 3D yekudhinda inosunga simba iri nani pane iyo yeSLA 3D kudhinda, kune ayo kune akawanda pores pamusoro pechiso cheSLS inosunga iyo inobatsira mukupinda kweiyo viscose.
SLA 3D kudhinda kwakaringana kubereka kweye prototype tenzi pateni, nekuti ine inotapira pamusoro, yakanaka yekudenga kugadzikana uye akanaka maficha.
Kubvisa & Kuwedzera Kugadzira
3D kudhinda inozivikanwa seyekuwedzera yekugadzira, iyo inovaka zvikamu kuburikidza nematanho ezvinhu. Iyo ine zvakawanda zvakanaka pamusoro pechinyakare maitiro ekugadzira zvisinei iine matambudziko ayo. CNC machining inzira yakajairika yekubvisa nzira inoshandiswa kumativi ekugadzira, ayo anogadzira zvikamu nekucheka chisina chinhu.
Zvishandiso & Kuwanika
Kudhinda kwe3D kunosanganisira zvikamu zvakagadzirwa netaundi uchishandisa dhairekitori senge emvura photopolymer resins (SLA), madonhwe e photopolymer (PolyJet), mapurasitiki kana mapoda esimbi (SLS / DMLS), uye filaments yepurasitiki (FDM). Saka inogadzira marara mashoma kana achienzaniswa neCCC maitiro. Cnc machine ndeyekucheka kubva pachidimbu chese chinhu, saka mashandisiro emari yezvinhu acho akaderera. Kubatsira kwacho ndekwekuti zvingangoita zvese zvigadzirwa zvinogona kuve zvakagadzirwa neCCC, kusanganisira yekugadzira-giredhi mainjiniya epurasitiki uye zvakasiyana simbi zvinhu. Izvi zvinoreva kuti CNC mashandiro anogona kuve anonyanya kushanda maitiro eprototypes uye ekupedzisira-kushandisa massa-akagadzirwa zvikamu zvinoda kuita kwakanyanya kushanda uye kwakakosha kuita.
Kururamisa, pamusoro pehunhu & Geometric Kukanganiswa
3D kudhinda kunogona kugadzira zvikamu zvine akaomesesa mageometri kunyange ane mhango chimiro izvo zvisingagone kuitwa neCCC machining, senge zvishongo, hunyanzvi, nezvimwewo CNC machining inopa hukuru hukuru kururamisa (± 0.005mm) uye zvirinani nani pamusoro pekupedzisa (Ra 0.1μm). Iwo epamberi 5-axis CNC yekugaya michina inogona kuita yakakwira-yakajeka machining ezvimwe zvakaoma zvikamu izvo zvinokubatsira iwe kusangana nematambudziko ako akaomesesa ekugadzira.
Mutengo, Wakawanda & Nguva Yekutumira
3D kudhinda kazhinji kunogadzira yakaderera huwandu hwezvikamu pasina tooling, uye pasina kupindira kwevanhu, kuitira kuti kukurumidza kutendeuka uye yakaderera mutengo zvinogoneka. Mari yekugadzira ye 3D kudhinda yakaderedzwa zvichienderana nehuwandu hwezvinhu, zvinoreva kuti zvikamu zvakakura kana huwandu hwakawanda zvinodhura zvakanyanya. Maitiro eCCC machining akaomarara, zvinoda zvinehunyanzvi vakadzidziswa mainjiniya kuti vatange-kuronga maparamendi ekugadzirisa uye nzira yekugadzirisa zvikamu, uyezve machining zvinoenderana nezvirongwa. Zvemagetsi zvekugadzira zvinobva zvatorwa zvichitora basa rekuwedzera. Nekudaro, CNC michina inogona kuenderera ichimhanya isina kutarisirwa nevanhu, ichiita kuti ive yakakwana kune makuru mavhoriyamu.
Inokurumidza Prototyping Uye Kugadzira, Cnc Kuchengetedza, Kurumidza Prototyping, Kukurumidza Prototyping, Cnc Rapid Prototyping, 3d Kudhinda & Rapid Prototyping Services,